कार्यलाई उत्तम अभ्यासहरू इन्फोग्राफिकमा कल गर्नुहोस्
कार्यमा सफल कलको लागि गर्नुहोस् र नगर्नुहोस्
बुधबार, मार्च 7, 2012 Douglas Karr
लिटमसका साथीहरूले यस इन्फोग्राफिकलाई सँगै राखेका छन् कार्यको लागि सफल कलको लागि गर्नुहोस् र नगर्नुहोस् (CTA) यो ईमेल मार्केटिंगमा मात्र लागू हुँदैन, यद्यपि। महान CTAs वेब मा किन्न आउन गाह्रो छ - तर आवश्यक छ! तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाइँको पाठकहरूको लागी एक मार्ग प्रदान गर्नुहोस्, तपाईसँग कार्य गर्नका लागि ठूलो कलहरू हुनु आवश्यक छ!
इन्फोग्राफिकबाट: जब तपाइँको पाठकहरूसँग कुराकानी गर्न ईमेल प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् प्रेरणादायक र प्रेरित गर्न। इमेजरी, पाठ, प्रस्तावहरू, चार्टहरू, र लिंकहरू तपाईंको अभियानहरू र पीक ग्राहकहरूको रुचि फरक पार्न मद्दत गर्दछ, तर तिनीहरूलाई तपाईंको ईमेल खोल्नको लागि आधा युद्ध मात्र हो। अर्को चरण भनेको कार्यलाई बाध्यकारी र शक्तिशाली कल टु एक्सन (CTA) मार्फत प्रेरित गर्न हो। जब तपाइँको अर्को अभियानको योजना गर्ने समय आउँदछ, तपाईका इ-मेलहरूमा कार्य-प्रेरणादायक सीटीएहरू सही तरिकाले समावेश गर्न यी सुझावहरूको पालना गर्नुहोस् (र गलत मार्गबाट ​​बच्नुहोस्)।
टैग: कार्यलाई कल गर्नुहोस्कार्य गर्न कलctaईमेल इन्फोग्राफिकइंफोग्राफ़कलिटमस
ल्यान्डि Page पृष्ठ पछाडि वेबसाइट परीक्षण
Google+ व्यवसायका लागि